အမေ ကို ချစ် တဲ့ သားဟာ မယားမချစ်ဘူး ဆို တာ မျိုး မဖြစ် ပါစေ နဲ့ ငါ့သား – Shwe Yoe
Shwe S N | January 28, 2022 | Knowledge | No Comments
အမေနဲ့မိသားစုကိုလဲချစ်ပါ မိခင်မျိုးနွယ်ဝင်ဇနီးသည်ကိုလဲချစ်ပါ..အမေ့အတွက်သားကောင်း အစ်မညီမအတွက် မောင်ကောင်း၊ အစ်ကိုကောင်းဖြစ်ပေမဲ့ ဇနီးသည်ကို မကောင်းဘူး ဆိုတာမျိုး မဖြစ်စေနဲ့ကွဲ့ မိသားစုကိုချစ်သလို ဇနီးသည်ကိုချစ်ပေးပါ…..
မိဘအိမ် မောင်နှမအိမ် ဇနီးသည် မသိဘဲမသွားနဲ့ငါ့သား သူတို့မိသားစုတွေ ငါ့ကွယ်ရာ ငါ့ယောက်ျားကိုဘာသွေးထိုးနေပါလိမ့်လို့
သူ့ဖက်ကအမြင်မျိုးဖြစ်စေတတ်လို့ တတ်နိုင်ရင် ငါ့သားမိသားစုဆီသွားရင် ဇနီးကိုခေါ်သွားကွဲ့မလိုက်တာတော့သူ့အပိုင်းပေါ့ ခေါ်ပါရဲ့နဲ့မလိုက်ပဲ စကားနာထိုးတာ သွေးထိုးတာလဲလက်မခံနဲ့ငါ့သားမိသားစုနဲ့ဇနီးသည်ကြား သမာသမတ်ကျကျ မျှမျှတတဖြစ်ပါစေ…။
ငါ့လုပ်စာပဲ ငါ့မိဘ မောင်နှမ ပေးတာ မိန်းမပြောစရာမလိုဘူး မထင်နဲ့ငါ့သား အမှားကြီးမှားမယ်
အမေကမွေး အမေပြုစုယုယပေးပေမယ့် အိမ်ထောင်ကျရင်အမေ မပိုင်ဘူး ငါ့သားလေးရဲ့….
မိန်းမ မသိအောင်ခိုးပေးခြင်းဟာ အမေ့သိက္ခာထိခိုက်သလို ချွေးမ အနေနဲ့ကြည့်ရင် သူ့မာန ထိခိုက်စေတ
မိန်းမရေ ဒီလောက် ဒီမျှတော့ မိဘတွေကန်တော့ရအောင်ကွာ ငါမပေးဘူး မင်းလက်နဲ့ပေးလို့ပြောတဲ့အခါယောက္ခမအပေါ် သိတတ်တဲ့ချွေးမအဖြစ် သူဂုဏ်တတ်ရလို့ ကြည်ဖြူကျေနပ်မှာပါ…။
လျို့ဝှက်အပ်ရာ အရာရာကို အစ်ကိုညီသား မိဘကိုထား မယားသော်မှမပြောရ ဆိုပေမယ့် အရာရာအတိုင်းလျှို့ဝှက်စရာမလိုဘူးငါ့သား
ဇနီးသည်ကို အလေးထားပါ တိုင်ပင်ပါ ဇနီးသည်ရဲ့ဂုဏ်ကို မြှင့်တင်ပေးပါ ငါ့သား…. ငါ့သားများအိမ်ထောင်ပြုခဲ့ရင်လေ…..မှာချင်တာတွေအများကြီးပါသားကြီးရေ ဒီနေ့တော့ ဒီမျှသာ…။
အမနေဲ့မိသားစုကိုလဲခဈြပါ မိခငျမြိုးနှယျဝငျဇနီးသညျကိုလဲခဈြပါ..အမအေ့တှကျသားကောငျး အဈမညီမအတှကျ မောငျကောငျး၊ အဈကိုကောငျးဖွဈပမေဲ့ ဇနီးသညျကို မကောငျးဘူး ဆိုတာမြိုး မဖွဈစနေဲ့ကှဲ့ မိသားစုကိုခဈြသလို ဇနီးသညျကိုခဈြပေးပါ…..
မိဘအိမျ မောငျနှမအိမျ ဇနီးသညျ မသိဘဲမသှားနဲ့ငါ့သား သူတို့မိသားစုတှေ ငါ့ကှယျရာ ငါ့ယောကျြားကိုဘာသှေးထိုးနပေါလိမျ့လို့
သူ့ဖကျကအမွငျမြိုးဖွဈစတေတျလို့ တတျနိုငျရငျ ငါ့သားမိသားစုဆီသှားရငျ ဇနီးကိုချေါသှားကှဲ့မလိုကျတာတော့သူ့အပိုငျးပေါ့ ချေါပါရဲ့နဲ့မလိုကျပဲ စကားနာထိုးတာ သှေးထိုးတာလဲလကျမခံနဲ့ငါ့သားမိသားစုနဲ့ဇနီးသညျကွား သမာသမတျကကြ မြှမြှတတဖွဈပါစေ…။
ငါ့လုပျစာပဲ ငါ့မိဘ မောငျနှမ ပေးတာ မိနျးမပွောစရာမလိုဘူး မထငျနဲ့ငါ့သား အမှားကွီးမှားမယျ
အမကေမှေး အမပွေုစုယုယပေးပမေယျ့ အိမျထောငျကရြငျအမေ မပိုငျဘူး ငါ့သားလေးရဲ့….
မိနျးမ မသိအောငျခိုးပေးခွငျးဟာ အမသေိ့က်ခာထိခိုကျသလို ခြှေးမ အနနေဲ့ကွညျ့ရငျ သူ့မာန ထိခိုကျစတေ
မိနျးမရေ ဒီလောကျ ဒီမြှတော့ မိဘတှကေနျတော့ရအောငျကှာ ငါမပေးဘူး မငျးလကျနဲ့ပေးလို့ပွောတဲ့အခါယောက်ခမအပျေါ သိတတျတဲ့ခြှေးမအဖွဈ သူဂုဏျတတျရလို့ ကွညျဖွူကနြေပျမှာပါ…။
လြို့ဝှကျအပျရာ အရာရာကို အဈကိုညီသား မိဘကိုထား မယားသျောမှမပွောရ ဆိုပမေယျ့ အရာရာအတိုငျးလြှို့ဝှကျစရာမလိုဘူးငါ့သား
ဇနီးသညျကို အလေးထားပါ တိုငျပငျပါ ဇနီးသညျရဲ့ဂုဏျကို မွှငျ့တငျပေးပါ ငါ့သား…. ငါ့သားမြားအိမျထောငျပွုခဲ့ရငျလေ…..မှာခငျြတာတှအေမြားကွီးပါသားကွီးရေ ဒီနတေ့ော့ ဒီမြှသာ…။
ပေါင်းဖက်ရန်အသင့်တော်ဆုံး အိမ်ထောင်ဖက်နေ့နံ များ နဲ့ နေ့ကောင်းရက်သာများ
နိုင်ငံသားအဖြစ် ခံယူ သူ တိုင်းကို နေထိုင်ဖို့အိမ်တွေ အလကားပေးတဲ့ နိုင်ငံ ( ၅ ) နိုင်ငံ